သြဂုတ်လရဲ့ နေထီးဆောင်း | Tachileik Online TV News
Home » ထူးဆန်း , သတင်း » သြဂုတ်လရဲ့ နေထီးဆောင်း
Written By Tachileik News Agency on Sunday, 24 August 2014 | 03:42
ယနေ့ ၂၀၁၄ခုနှစ် သြဂုတ်လ(၂၄)ရက် နေ့လည် (၁၁း၄၀)နာရီတွင် တာချီလိတ်မြို့ ကောင်းကင်ထက်၌ တွေ့မြင်ရသည့် နေထီးဆောင်းသည့် မြင်ကွင်းပဲဖြစ်ပါသည်။
အာက်ပါစာသားအား Freeburmamedia မှ ကူးယူဖော်ပြသည်။
According to the Burmese transnational Astrology, Our people believe about the Sun, Moon and planet. Today, We saw the Sun around the black shade as like as umbrella. This meaning saying, must be changing the government in my country.
ဂငယ် လေးဆူ အုတ်သစ်ထူ ထူသည့် အုတ်သစ် ဆယ့်ကိုးနှစ် ဆယ့်ကိုးနှစ်ကျော် တဖန်ပေါ် ပေါ်သည့် ဦးခေါင်း နေထီးဆောင်း ရွှေခေါင်းပြောင်ပြောင် လမ်းလယ်ခေါင် တစ်ရောင်ထဲထွက် မင်းလည်းပျက် ဖြစ်ပျက်စုံညီ မြန်မာပြည် အောင်စည်သံတို့ မြည်လာပြီ... ၀ိဇ္ဇာရှစ်သောင်း ဆရာအပေါင်း ခညောင်း မ လိမ့်မည်။
ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်နေမင်း ကိုယ်တိုင် ရိုက်ထားတဲ့ MNA ရှေ့ဘီးချမရတဲ့ ခရီးစဉ်ရဲ့ လေယာဉ်ပေါ် မှတ်တမ်း
"မန္တလေးအပြည်အပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှာ ရန်ကုန်ကနေ မန္တလေးကို လာရောက်တဲ့ မြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်းလိုင်းရဲ့ UB103 ဟာ ၂၀၁၉ခုနှစ် မေလ(၁၂)ရက...